UpSize स्तन वृद्धि को लागी क्रीम | सौन्दर्य समीक्षा
UpSize स्तन वृद्धि को लागी क्रीम
क्रीम UpSize स्तन वृद्धि को लागी एक अवसर महिलाहरु लाई शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप बिना सहारा बिना आफ्नो बस्ट ठूलो र कडा गर्न को लागी एक अवसर हो। त्यहाँ कुनै contraindication र न्यूनतम प्रभाव हर्मोनहरूमा छ, यो कुनै पनि महिलाको लागि उपयुक्त बनाउने। केही हप्तामा, तपाईं आफ्नो सुन्दर स्तनहरूको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ।
विवरण र उद्देश्य UpSize तर
महिलामा सबै भन्दा सामान्य स्तन आकार बी आकार हो। त्यहाँ एक कपको साथ धेरै महिला छन्। सामान्यतया, यी स्तन आकार भएका महिलाहरूले तिनीहरूलाई नकारात्मक रूपमा हेर्छन्। उनीहरू आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्न को लागी थप प्याडिंगको साथ ब्राहरू खरीद गर्छन्, जसले ठूला स्तनहरूको भ्रम पैदा गर्दछ। तर यो कपको सहारा लिने साथीको अगाडि ना naked्गो हुनु सजिलो छैन।
स्तन सामान्यतया केटीहरूको लागि9को उमेर वरिपरि गठन सुरु हुन्छ। 18 को उमेर वरिपरि विकास पूर्ण रूपमा रोकिन्छ। यस समय द्वारा गठन भोल्यूम र आकार सामान्यतया जीवनको लागि महिला संग रहन्छ।
यदि आकार उपयुक्त छ भने, त्यहाँ धेरै परिस्थितिहरू छन् जसले स्तनको आकारलाई नकरात्मक रूपमा असर गर्न सक्दछन्। यी मध्ये केही अवस्थाहरूमा गर्भावस्था, दुग्धपान, हार्मोनल सर्जेस, द्रुत तौल फाइदा वा नोक्सान, अवैध लागूपदार्थको प्रयोग, र अन्य समावेश छन्। नतिजाको रूपमा, बस्ट sags, नरम र flabby बन्न।
कहाँ किन्ने UpSize क्रीम
UpSize क्रीम द्वारा विकसित गरिएको थियो Hendelगार्डन, एक अग्रणी कस्मेटिक कम्पनी, वैज्ञानिक अनुसन्धान को धेरै वर्ष पछि। युरोपेली महिलाहरूले चाँडै यस उपचारका सकारात्मक नतीजाहरूको मूल्या .्कन गरे।
तपाईं एक फार्मेसी वा स्टोरमा यो क्रीम फेला पार्नुहुनेछ। यो निर्माताको वेबसाइटमा विशेष रूपमा अर्डर गर्न सकिन्छ।
UpSize रचना: अवयवहरू के के हुन्?
अवयवहरूको एक कायाकल्प र उत्थानकारी प्रभाव हुन्छ। थप रूपमा, यसले स्ट्रेच मार्कहरू मेटाउन योगदान पुर्‍याउँछन्, जसले स्तनपान गराएपछि जवान आमाहरूका लागि धेरै निराश पार्छन्। यी सबै शरीरलाई हानी नगरीकन वा तपाइँको हर्मोनलाई परिवर्तन बिना नै, किनकि क्रीम लगभग पूर्ण रूपमा जडिबुटी छ।
यस नवीन औषधिको विकासको क्रममा, वैज्ञानिकहरूले प्रत्येक घटकका उपयोगी गुणहरूमा निर्माण गरे। यो विशेष गरी महिला शरीरमा हर्मोनल परिवर्तन वा नोक्सान रोक्नको लागि बनाइएको हो।
को सामग्रीहरु UpSize क्रीम समावेश:
आवश्यक तेल गुमाउनुहोस्। यो तेलले स्तनहरूको छालामा कोमल र टाउट प्रभाव उत्पन्न गर्दछ। यसले एक सुरक्षात्मक प्रभाव पार्छ, भविष्यको स्ट्रेच मार्कको उपस्थिति रोक्न
Deoxymiroestrol। यस घटकको उद्देश्य बुढेसकालको प्रक्रिया सुस्त गर्नु र नयाँ बृद्धि र कायाकल्पनलाई उत्तेजित गर्नु हो।
प्यूरियारिया मिरिका। यो घटक छाला कोषहरू र glandular स्तन टिशू को लागी आवश्यक पोषण प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, यस बोटले बाहिरी कारकहरूको नकरात्मक प्रभावलाई रोक्दछ जुन छालाको समयपूर्व बुढापना निम्त्याउँछ।
Rhizoma anemarrhenae। यस घटक तत्व UpSize क्रीमले छातीमा रक्तस्राव सुधार गर्दछ र रक्तको थक्का रोक्दछ। यसले एन्टीआक्सीडन्टको रूपमा पनि काम गर्दछ, फ्रि रेडिकलहरू बिरूद्ध लडिरहेको जुन क्यान्सरलाई उक्साउँदछ।
मकाडामिया तेल। यो तेल एक monounsaturated palmitic एसिड हो, जो प्राकृतिक छालामा प्राकृतिक रूपमा उपस्थित छ। यस तेलले टेन्डर मादा स्तनको लागि हेरचाह गर्दछ, सक्रिय रूपमा मॉइस्चराइजिंग, पोषणयुक्त, नरम पार्ने, र रिड माइक्रोक्रिसुलेसन सुधार गर्ने।
भेडा मक्खन। यस घटकले कोलेजेनको संश्लेषण सक्रिय गरी सक्रियतापूर्वक नरम र सुरक्षा गर्दछ। तेलले बुढेसकालको प्रक्रियालाई सुस्त बनाउन र डिहाइड्रेशनबाट बचाउन मद्दत गर्दछ।
जोजोबा तेल। यस घटकले दिनभर मॉइस्चराइजिंग प्रदान गर्दछ र सेबमको उत्पादनलाई सामान्य बनाउन मद्दत गर्दछ।
भिटामिन इ। यो घटक बुढ्यौली प्रक्रियाको एक शक्तिशाली retarder हो। यसले रक्त परिसंचरणमा सुधार गर्दछ र टिश्युहरूको पुन: निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ, विशेष गरी जहाँ ठाँउको दाग वा दागहरू छन्।
यो यी आधारभूत सामग्रीहरू हुन् जसले अद्वितीय सूत्र बनाउँछ UpSize क्रीम, जसले छिटो बढाउँदछ र पोखरी बस्टको आकार सुधार गर्दछ।
प्रयोगको लागि निर्देशन UpSize स्तन आकार बढाउन
तत्काल उपयोग गर्नु अघि, यो क्रीममा एलर्जीको प्रतिक्रियाको लागि परीक्षण गर्न आवश्यक छ ठूलो मात्रा प्रयोग गरेर कुनै अप्रिय अनुभवहरू जोगिन। ध्यानपूर्वक निर्देशनहरू पढ्नुहोस्। तिनीहरू सजिलैसँग बुझ्नको लागि लेखिएका हुन्।
अधिकतम प्रभाव प्राप्त गर्नका लागि, यो निर्देशनहरूको पालन गर्न अत्यधिक सिफारिश गरिएको छ र नतीजाहरू छोटो समयमा आउनेछन्ः
डिकोलेट क्षेत्रको छाला होसियारीसाथ सफा भएको सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्दछ।
तौलियाको साथ नरम, स्ट्रोकिंग आन्दोलनको साथ स्तन ब्रेस्ट गर्नुहोस्।
को एक सानो रकम लिनुहोस् UpSize क्रीम र दायाँ छाती मा लागू गर्नुहोस्। गोलाकार गतिमा छालामा क्रीमलाई हल्का रूपमा मालिश गर्नुहोस् सम्म छाला द्वारा पूर्ण रूपमा लीन हुन्छ। औसतमा, यसले 10 मिनेट लिन्छ।
बाँया स्तनको साथ पनि यस्तै गर्नुपर्दछ। हतार नगर्नुहोस्। क्रीमको मालिसिंग अप्रिय वा दर्दनाक संवेदनाहरूको साथ हुनुहुँदैन।
अर्को चरण दुबै स्तनको मालिश गर्नु हो। निप्पल्स वरिपरि प्रकाश आवाश्यक सिफारिश गरिन्छ, लगभग5मिनेट को लागी, ग्रन्थीहरु उत्तेजित गर्न।
यो प्रक्रिया दिनको दुई पटक गर्नुपर्दछ, एक पटक बिहान र राती एक पटक। को नतीजा UpSize क्रीम व्यक्तिगत रूपमा फरक छ। केही महिलाहरूले एक हप्तामा प्रभाव देख्दछन्, अरूलाई आकार बढेको हेर्न एक महिनाको आवश्यक पर्दछ। निर्माताले 30 दिन भित्र तपाईंको बस्टमा सुधारको ग्यारेन्टी दिन्छ। तपाइँको स्तनहरू ठूला, अधिक गोलाकार र स्पर्शमा स्वैच्छिक हुनेछन्।
को वास्तविक समीक्षा UpSize तर
हुनत UpSize बजारमा भर्खरको आगमन हो र ईन्टरनेट मार्फत मात्र बिक्री गरिन्छ, यो निकै लोकप्रिय भएको छ। नेटको पार, तपाईं सकारात्मक सकारात्मक समीक्षा पाउन सक्नुहुनेछ UpSize, जो यसको प्रभावकारिताको सबै भन्दा राम्रो पुष्टि हो।
डायना, 43 वर्ष पुरानो
जब म जवान थिएँ, म एक शानदार बस्ट थियो। यद्यपि, समयसँगै, उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरूको परिणाम स्वरूप, मेरो स्तनहरू उनीहरूको पुरानो लोच गुमाए। मैले देख्न थालें कि मेरा स्तनहरू झर्दै र आफ्नो आकार गुमाउँदै थिए। अब गहिरो dolcolletage मेरो लागि वर्जित थियो। मसँग दुई विकल्पहरू थिए: मेरो उमेरको अवस्था स्वीकार गर्न वा आधुनिक सौन्दर्य प्रविधिहरूको फाइदा लिन। तर, काश, मैले तेस्रो विकल्प फेला पारे - UpSize क्रीम यो जादु जस्तो थियो। तीन हप्ता भित्र मैले याद गरें कि मेरो स्तनमा छाला बढी लोचदार थियो, झिम्काइहरू हराउँदै गइरहेका थिए र यसले मलाई मेरो युवावस्थाको सम्झना गराउन थाल्छ। मेरो बस्ट पूर्ण र कडा थियो। मेरा साथीहरू र सहयोगीहरूले परिवर्तनहरू याद गरे। मेरो प्रेमिका अझै पनी यो क्रीम को परिणामहरु विश्वास गर्न सक्दैन। मैले तिनीहरूलाई अत्यधिक सिफारिस गरें।
अन्ना, 24 वर्ष पुरानो
बचपनदेखि, म मेरो भव्य बस्टका लागि परिचित थिए तर प्रशस्त वजनको लागि। जब म वयस्क भएँ, मैले तौल बगाउन धेरै प्रयास गरें र 20 महिनामा चमत्कारी ढंगमा 20 किलोग्राम हरायो। दुर्भाग्यवश, यसले मेरो स्तनहरूमा एकदम नकरात्मक प्रभाव पार्‍यो, जुन अब saggy थिए र उनीहरूको सुन्दर आकार गुमाइसकेका थिए। निस्सन्देह, यसले मलाई अत्यन्तै निराश बनायो। मेरो स्तन राम्रो देखाउनको लागि, मैले सुधारात्मक अंडरगारमेंट प्रयोग गरें। मेरी आमाले समस्याको बारेमा थाहा पाएर मलाई किन्नुभयो UpSize मलाई क्रीम र जन्मदिनको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। सुरुमा त यस्तो उपहार पाएर म क्रोधित भएँ तर क्रीमको केही हप्ता पछि म आफ्नो आमाप्रति कृतज्ञ भएँ। मेरो स्तनको स्वास्थ्य सुधारिएको छ र तिनीहरू लोचदार र टाउको भएको छ। तिनीहरूका आयामहरू फर्किए र अब दुबै पुरुष र महिलाले मलाई हेर्छन्; l with!!!!!!!!!!!! l!! l! l!! men! men men l men men! men!!! men men men men l!! l men men!! l!!! l!! l men men! l men men l men men l l l men men l l men l l l!! l
को उपयोगी गुण UpSize तर
महिलाको लागि डेकोलेट क्षेत्र शरीरको विशेष अंग हो। यो क्षेत्र हो कि पुरुषहरुको दृश्य पहिले आकर्षित गर्दछ। त्यसकारण, महिलाको लागि सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको क्षेत्र हेरचाह गर्ने।
त्यहाँ स्तनहरूको लागि धेरै प्रसाधन सामग्रीहरू छन्, तर केवल UpSize क्रीम उनीहरूको सबै उपयोगी गुणहरू संयोजन गर्दछ। उनीहरु मध्ये:
छालालाई नमी पार्दै र कायाकल्पको प्रक्रिया सुरू गर्दै;
ग्रन्थ्युलर टिश्यूलाई उत्तेजित गर्ने, जसले हर्मोनल पृष्ठभूमिलाई गडबड नगरी स्तनको मात्रामा वृद्धि गर्दछ;
छालाको उपचार, मखमल र कोमल छालाको परिणाम स्वरूप।
थप रूपमा, को सबै उपयोगी गुणहरू बीच UpSize, शायद सबै भन्दा राम्रो सुधार महिला को मनोवैज्ञानिक स्थिति हो, उनी आफैलाई नकारात्मकता हटाउन मद्दत। नतिजा स्वरूप, महिला बढी आराम र आत्मविश्वास हुन्छे, उनको आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवन सुधार गर्न मद्दत।
प्लास्टिक सर्जरीको सम्भावित नकरात्मक परिणामहरू
इम्प्लान्टको अनुचित प्लेसमेन्ट। यसले छाती वा अप्राकृतिक आकारको स्लेन्टिatural्ग गर्न सक्छ।
शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीको उच्च सम्भावना प्रत्यारोपणलाई एक विदेशी शरीरको रूपमा अस्वीकार गर्दछ। यसले गम्भीर दुखाइ ल्याउन सक्छ र स्तनको अवस्थालाई अझ विकराल गर्न सक्छ।
दाग र ईन्फ्लेमेसन
धेरै मेडिकल प्रक्रियाहरू र परीक्षामा भाग लिन असमर्थता।
संयोजी ऊतकको विस्तारको जोखिम।
यी परिणामहरू बनाउँछ UpSize क्रीम महिलाको लागि एक Godsend। यसको अनौंठ सूत्रको कारण, महिलाहरू आफ्नो बस्ट साइजमा उल्लेखनीय बृद्धि गर्न र पीडा वा शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप बिना आकारमा सुधार गर्न सक्षम छन्।